Kii Hal Wata ba Miyaad I Siinaysaa: W/Q: Sakariye-Awaare. | HAYAAN NEWS
Kii Hal Wata ba Miyaad I Siinaysaa: W/Q: Sakariye-Awaare.
May 21, 2017 - Written by Mustafe Jannaale
Nin weyn oo Oday ah ayaa wuxuu dhalay dhowr wiil iyo gabadh keli ah oo Bureeqa la yidhaahdo, Odayga hammigiisa ugu weyni wuxuu ahaa inuu geel helo oo wuu adduun jeclaa, dabeeto maalin ayuu nin Axmed la yidhaahdaa u yimi oo ku yidhi “Adeer waxaan doonayaa inaad inantaada Bureeqa i siiso yaradkana aad codsato waxaad doonayso” inantuna inan boqol loogu galo ayay ahayd. Intuu Odaygii kala batay ayuu yidhi “adeer aniga Shan iyo Toban halaad uun i sii” garo oo haddii uu Boqol halaad codsan lahaa xataa waa la siin lahaa. Axmed intuu aad u farxay ayuu hoosta ka yidhi ma Alxmdulilah ma Bureeqa ayaad sixir jaban ku heshay’ ka dibna intuu degdeg u dhaqaaqay ayuu 15-kii halaad dabada ka soo kexeeyey, markii uu jidka marayey ayay midi ka baxsatay, afar iyo tobankii kale ayuu Odaygii u keenay, wuxuuna u sheegay inuu hashii baxsatay baadidoonayo.
Bartii ayaana inantii loogu meheriyey. Axmed dib ayuu u noqday oo hashii ayuu doonay, Odaygiina 14-kii halaad ayuu inamadiisii oo gurigii agjooga u dhiibay Inantiisiina wuxuu ku yidhi “Wiil Axmed la yidhaahdo ayaan ku siiyey” dabeeto way yaabtay, haddana wuxuu u raaciyey “Aabbe waaban kuu meheriyey oo wuu kuu imanayaa Hal yaradka ka dhiman ayuu wadaaye soo dhowee oo waku kaa” inantana Axmedkaa la siiyey hore isumay arag. Odaygii reerkiisii kale ayuu u sii dhaafay, Inantii Bureeqina ayay is diyaarisay oo aqalkeedii hagaajisay. Ninkii Axmedna baadidoonkii ayaa la fogaadey oo weli waa maqan yahay. Dabeeto markii gabbalku dhacay ee xoolihii la soo xereeyey ayaa Nin socoto ah oo hal wata magiciisana la yidhaahdo Carab ayaa reerkii u soo hoyday, dabeeto markuu bariidiyey ee aanuu wax kale ba weli kala hadal xataa i waraabiyana, ayaa ba laga hor yaacay oo lays yidhi ninkan hasha wataa waa Axmedkii Bureeqa loo meheriyey oo hashii soo helay, garo oo reerku ma khalddana oo Axmed iyo hashii ayay sugayeen, Carabna ma khalddana oo marti buu is lahaa.
Ninkii ayaa lagu boobay ‘Alla waa Axmed waar walaal ilaahay Hashii ma ku soo siyeey, Kud ku dil hasha xuni way ku dhibtee’ ninkii Carabna wuxuu iska aqbalay magacan loogu yeedhayo iyo gasiinkii lagu sooryeynayey, halkii ayaa la ceesheeyey, dabeeto waxa la galbiyey ninkii iyo Bureeqa, halkii ayaa ninkii Carab oo Axmed la moodayaa habeenkii aroos ku ahaa.
Subixii ayuu Jarmaaday ileen waxii uu xalay sameeyey ayuu ogyahaye hashiisiina sii kaxaystay.
Barqadii ayaa Axmedkii dhabta ahaa oo hashii wada ayay guriga duleedkiisa kulmeen Odaygii oo isna xagga gurigii Inantu joogtay ku soo socda, waar “Axmed ma soo heshay hashii, kud ku dil dheh way ku dhibtee” haa Aabbe ayuu Axmedna ugu jawaabay, way isi soo raaceen, Bureeqa oo codkooda maqashay ayaa debedda u soo baxday. Odaygii ayaa kor u qayliyey oo yidhi “Bureeqaay.. Bureeqaay kaalay Aabbe waakan Axmednee” inantii oo yaabban ayaa ugu jawaabtay “Aabbe Axmedkee?!!!!”.
“Waar miyey waalan tahay, dee Axmedkii aan ku siiyey ee kuu meheriyey, waakan Hashiina wadee”.
Bureeqa oo yaabban oo amakaagsan ayaa mar keliya ku jawaabtay. “Aabbe Hal lahaane, Ninkii Hal wata ba miyaad i siinaysaa?!!”.
Berbera ayaa tidhi “Madaxweyne kii 15 sita ba miyaa lay siinayaa?”.
Sakariye Saxardiid Axmed (Awaare).